Ngokuzenzekelayo ukwakhiwa kwe-REST API yakho, iPhaneli yoLawulo, kunye noXwebhu lwePostman | Martech Zone
Ngokuzenzekelayo ukwakhiwa kwe-API yakho yeREST, iPhaneli yoLawulo, kunye noXwebhu lwePostman
NgeCawa, nge-31 kaJanuwari 2021 NgeCawa, nge-31 kaJanuwari 2021 Douglas Karr
Eyona ndlela ibalaseleyo yokulinganisa nasiphi na isicelo kwi-intanethi ukwahlulahlula ujongano lwakho kumaleko wedatha usebenzisa iNkqubo yoNxibelelwano lweNkqubo (API). Ukuba umtsha kuphuhliso, an I-API ngumbono olula. Kanye njengokuba ungena kwaye usebenzisa usetyenziso lwewebhu ngesikhangeli kunye nothotho lwe HTTP izicelo, isicelo sakho singenza into efanayo nge-REST API kunye nenkqubo.
Njengabantu abaninzi abangena kwinkqubo, badwelisa ujongano lomsebenzisi kwaye banxibelelane ngqo kwiziko ledatha labo. Kulungile ukuba sisicelo esincinci kwaye awuboni kusengaphambili ukuba utshintshe ujongano lomsebenzisi, indawo yogcino lwedatha, okanye umlinganiso wesicelo. Kodwa… xa ufuna ukwenza enye yezi zinto zingasentla, ngoku ukudityaniswa kwekhowudi yakho enzima phakathi kwesiphelo sakho sangaphambili kunye nedatha yakho kufuneka ihlaziyiwe.
Ukuphuhlisa i-API phakathi kweyakho frontend kwaye umva wokuphela Inika umaleko wokuzimela phakathi kwe ukuya kukuvumela ukomeleza kunye nokulinganisa iqonga lakho. Xa sakha eyethu Isicelo sokufudumeza i-IP Kutshanje, siphuhlise ii-API saza safaka ezinye… ukusuka ekuhlanjululeni i-imeyile, ukujonga ukujonga i-imeyile, ukugcinwa kwesicelo, ukuya kusetyenziso lwentlawulo. Isicelo yimashup yeenkonzo ezininzi kunye namaqonga. Ngokwakha ii-API, ikhulule ababhekisi phambili bethu ukuba babethelele ngakumbi kwaye senze ukuba uyilo lwethu lube lula ngakumbi.
Ukuyila i-API kukunceda wandise iminikelo yakho ekubeni nje liqonga elinonxibelelwano lomsebenzisi nayo ibe yinkonzo enokuthi idityaniswe nabanye kwaye bayisebenzise njengoko kufuneka. Njengoko iinkampani zijonga ukutshintsha ngokwamanani, ii-API ziyimfuneko. Njengeqonga, ukuba neenkampani ezidityaniswe ngokupheleleyo nge-API yakho kuyabambelela kakhulu… nje ukuba zidityaniswe, abafuni ukushiya okoko kukho indleko zokudibanisa kwakhona neqonga labo elitsha.
Uyakha njani i-API yakho ngokuzenzekelayo
I-automator yakhe uluhlu lwezinto ezinamaxabiso afikelelekayo ukulungiselela ukuzenzekelayo ukwakhiwa kwe-API yakho. Ukuba usebenzisa ubuchule obukhulu bokwenza iikhowudi kwaye wenze ukuba isiseko sedatha sakho sihlale kakuhle, zibonelela ngezixhobo eziza kufunda imisebenzi yakho kunye nesiseko sedatha kunye nokwakha ii-API ekufuneka uzixhasile ngokupheleleyo kwisicelo sakho. Izixhobo zabo zinokubandakanya ukuphuhlisa amaXwebhu ePosi, ukuNgqinisisa, kunye neepaneli zolawulo. Nalu uluhlu lwezixhobo zabo:
Ngokuzenzekelayo i-PHP REST API yeJenaliyitha + yamaXwebhu ePosi asuka kwindawo yogcino lwedatha ye-MySQL ene-JWT -Esi sixhobo sikrelekrele sisetyenziselwa ukumisela kwangaphambili ukhetho olukhethwe kwindawo nganye yokuphela ye-REST API.
Ukuphendulwa ngokuzenzekelayo kwePhaneli yoLawulo lwePaneli + yoLawulo lweMvume kwiDatabase ye-MySQL -Kusuka kulawulo lwemvume kulawulo lweendaba inkalo enkulu exhaswayo.
Iposi ye-PostgreSQL ku-REST API wejenali yokuQinisekiswa kweMpawu yeJWT- PHP + Postman -Zenzele ngokuzenzekelayo ubuchwephesha bokulungela ukusebenzisa i-REST API kwindawo yogcino lwedatha yePostgreSQL enePostman Docs kunye ne-JWT Authentication. Ilungele ukusebenzisa ulayisho lwefayile kunye nesaziso seFirebase.
I-ReactJS yoLawulo lwePhaneli yeJenreyitha ye-MaterialUI ene-PHP REST API yejenali evela kwi-MySQL + JWT Auth + Postman -Yenziwe ngobuchwephesha bewebhu obungaphambili, iReactJS App Generator Nge-PHP CRUD REST API Generator sisisombululo esinamandla nesinomdla wokudala iReactJS Application kwi-MySQL.
I-NodeJS REST API + ReactJS Admin yePhaneli yeGenerator evela kwi-MySQL + JWT + Postman JSON -Yenziwe ngobuchwephesha bewebhu obungaphambili, iReactJS App Generator eneNodeJS CRUD REST API Generator sisisombululo esinamandla nesinomdla wokudala isicelo seReactJS kwi-MySQL.
I-MySQL ukuya kwi-Dot yeNet ngokuzenzekelayo i-REST API yeJeneretha + yeJWT Auth + Swagger + Iposi -Yenza ngokuzenzekelayo i-NET.
I-MS SQL ukuya kwiNet Core rest API yeJenreyitha eneJWT Auth + Swagger + Iposi -Zenzele ngokuzenzekelayo i-NET.
I-NodeJS REST API Generator evela kwi-MySQL + uPostman Json + JWT Auth-Windows -Yenza ngokuzenzekelayo ukuba ubuchwephesha bulungele ukusebenzisa i-REST API kwindawo yogcino lwedatha ene-Postman Amaxwebhu kunye nokuNgqinisisa i-JWT
Thenga ngoku Thenga ngoku (MacOS)
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco am amanyeneyo kulo lonke eli nqaku kuyo yonke Automator iimveliso.
tags: .netIphaneli yomlawuliApiungqinisiso lwe-apiapi wenkunkumaungqinisiso lwendawoichaphaza netjsonjwtithokheni yejwtizinto ezibonakalayomysqlUmvelisi wepaneli yomlawuli we-mysqlIifayilephp ukuphumla apimzbintsiqlUnoposiUmthunywa weposi jsoniimpendulorestiator generatorSwaggerwindows
Iindlela zeTekhnoloji zaMva nje kuThengiso
Kutheni ndicebisa iiNkampani ze-SaaS ngokuchasene nokwakha iiCMS zazo